Ubume boKhenketho obusanda kufunyanwa eNiger Delta eNigeria
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseNigeria zokuPhula » Ubume boKhenketho obusanda kufunyanwa eNiger Delta eNigeria
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Utyalo mali • iindaba • Iindaba zaseNigeria zokuPhula • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Agasti 24, 2021
Ngokwe-International Maritime Bureau (IMB), bekukho i-135 yokuxhwilwa elwandle okurekhodwe ngo-2020 -kwaye i-130 yabo yenzeke kwi-Gulf of Guinea. Ngokufana nokubanjwa kweMozart, uninzi lolo qweqwe lulandele iskripthi esiyingozi ngakumbi.
Ngaphandle kwale nkokeli yezokhenketho yalapha ijonge kwiintatheli ukuba zisasaze umfanekiso owahlukileyo omema ngakumbi lo mmandla waseNigeria ukutsala umdla wokhenketho.
INiger Delta yiDelta yoMlambo iNiger ehleli ngqo kwiGulf of Guinea kuLwandlekazi lweAtlantic eNigeria.
I-Niger Delta yaziwa ngokuba yi-Piracy, imigulukudu exhobileyo, kunye nokuchitheka kwe-oyile, nto leyo eyenza ukuba uphuhliso lwezokhenketho lube ngumceli mngeni.
Sihlalo, INigeria Umanyano lweeNtatheli (i-NUJ), IBhunga likaRhulumente waseBayelsa, uSamuel Numonengi kodwa uziva esasazeka ekusasazeni ulwazi njengoyena phuhliso lokhenketho kwiNiger Delta Region.
Ukuhamba noKhenketho lushishino loxolo. Oku kunokuba lithuba lokuba abantu bakwiNiger Delta eNigeria ukuba bakhele phezu kwabo. Iqhula kulo mzamo linokuza livela eJamaica.
Akukho ndawo eMhlabeni apho abaphangi baphamba khona rhoqo kunakwiGulf of Guinea, apho ngaphezulu koomatiloshe abali-130 babanjwa bathinjwa kunyaka ophelileyo.
Uphando olwenziwe yi-World Conservation Union kunye nee-arhente zikarhulumente zaseNigeria zibonisa ukuba ngonyaka ngamnye kule minyaka ingama-50 idlulileyo i-oyile echithwe eNigeria ibilingana nokuchithwa kwe-Exxon Valdez ngo-1989 eAlaska.
Indawo iyingozi kakhulu kunxweme lwaseSomalia. I-EU ifuna ukwenza okuthile ngayo.
Isebe likaRhulumente wase-US lithetha ngohambo oluya eNigeria: Phinda ujonge uhambo oluya eNigeria ngenxa ulwaphulo-mthetho, ulwabilo, izidubedube zasekuhlaleni, kuthinjwa, yaye ulwaphulo-mthetho lwaselwandle. Zilolonge ngakumbi ngenxa yokuba I-COVID-19. Ezinye iindawo zongeze umngcipheko. Funda yonke Ingcebiso ngezohambo.
Isifundo se-2018 kwiNiger Delta Region kunye nophuhliso lwezokhenketho lushwankathela:
Eyona nto iphambili kolu phononongo yayikukujonga ukuphanga elwandle kunye nefuthe lazo kuphuhliso lokhenketho kwiNiger Delta Region yaseNigeria.
Ngokuvulwa kweZiko loKwamkelwa kwezoKhenketho uthe umbono woluntu wommandla osekwe kwindlebe uyingozi kuphuhliso lwezoqoqosho nezentlalo zommandla waseNigeria, egxininisa ukuba lixesha lokuba abantu bethu baqale ukunika ingxelo yabo. ibali ukulungisa ukungachaneki kwangaphambili malunga nommandla.
Sihlalo, INigeria Union yeNtatheli (NUJ), IBhunga likaRhulumente waseBayelsa, uSamuel Numonengi ukugxekile ukusasazwa kolwazi njengesixhobo sophuhliso lokhenketho kwiNiger Delta Region.
UNumonengi uchaze ukungabikho kwamaxwebhu afanelekileyo elifa lemveli lenkcubeko yeIjaws njengomceli mngeni omkhulu ekukhuthazeni amandla ezokhenketho.
Uye waphawula ukuba izigidi zemisebenzi kunye namashishini axhomekeke kwicandelo lokhenketho eliqinileyo nelinenkqubela phambili. Ezokhenketho zingamandla okuqhuba ekukhuseleni ilifa lemveli kunye nelenkcubeko, zigcinelwe izizukulwana ezizayo ukuba zizonwabele
Uthe amaZiko oLwazi lwaBatyeleli (VICs), kungenjalo abizwa ngokuba “NgamaZiko oLwazi lwaBakhenkethi okanye amaZiko aWamkelekileyo, amiselwe ikakhulu ukunika abahambi ulwazi oluluncedo ukuphucula ukuhlala kwabo kwindawo ethile yokundwendwela.
UNumonengi uthe i-Ernest Ikoli yeZiko eliLawula uLwazi lweZiko kulindeleke ukuba libonelele ngendawo enobubele neyamkelekileyo kubakhenkethi abatyelele urhulumente okwesihlandlo sokuqala ukuba babe nolwazi olubalulekileyo malunga neemveliso zokhenketho kunye neenkonzo, kunye nokubonelela ngengcebiso yokuhamba okanye isikhokelo solo hlobo. abakhenkethi.
Ucacise ukuba amalungu ekomiti yolawulo ye-Ernest Ikoli yeZiko loLwazi ngezoNdwendwe abakhethwe ngononophelo kulindeleke ukuba baqalise imisebenzi yokukhuthaza ukhenketho ngokwenza intengiso yeemveliso zokhenketho lwasekhaya kunye neenkonzo ukudala ifuthe ngqo kuqoqosho lwasekhaya ngenjongo yokuphucula ukonwaba kwabahlali kunye neendwendwe.
Ngokutsho kukaSihlalo weBhunga likaRhulumente, eli nyathelo liyinxalenye yeBhunga likaRhulumente waseBayelsa we-Nigeria Union of Journalists ukuxhasa iinzame zophuhliso lwezoqoqosho nezentlalo zolawulo lwentuthuko phantsi kweSenator uDouye Diri.
U-Ernest Ikoli weKomiti yoLawulo lweeNdawo zoLwazi u-Sihlalo we-Travel Writers Corps yase-Nigeria i-Union of Journalists, iBhunga likaRhulumente wase-Bayelsa, u-Piriye Kiyaramo njengo-Director-General, ngelixa u-Nobhala we-State Council ye-NUJ, u-Comrade Ogio Ipigansi eza kusebenza njengo-Nobhala.
Amanye amalungu abandakanya: Owayesakuba ngusihlalo wombutho wabasebenzi, u-Tarinyo Akono, owayengunobhala welizwe, u-C Stanley Imgbi, uMququzeleli we-International Institute of journalism (IIJ), iZiko lokuFunda i-Yenagoa, i-Roland Elekele kunye ne-Business Manager ye-Silverbird FM i-Oxbow Lake Swali-Yenagoa, Iimbatyisi ze-Egrebindo
Kukwanyulwe uMphathi Jikelele we-Peoples 'FM, u-Oxbow-Lake, uLawson Heyford, Umphathi Jikelele weRoyal FM, iAgudama, uTudor Ayah, uMlawuli Jikelele weBroadcasting Broadcasting Corporation, uTerence Ekiseh, Mnu. Tonye Yemoleigha (Radio Bayelsa), Mnu Fiezibe Osain (Icandelo loMphathiswa Wezolwazi), Mnu Agidee Theophilus (Umabonakude Ozimeleyo wase-Afrika), uMhleli oyiNtloko yeeWave Ezintsha, Uxolo Sinclair, Owayesakuba ngumphathi weSizwe we-NAWOJ, uBeatrice Sikpi kunye nowayesakuba nguSekela Mongameli woMbutho weSizwe we-Women Journalists (NAWOJ), Nksz Timi Idoko.
Ephendula, uMlawuli-Jikelele weErnest Ikoli yeZiko loLwazi lweeNdwendwe, uQabane Piriye Kiyaramo, ophindwe kabini njengosihlalo, Ababhali beeNdawo zokuHamba ze-NUJ, ubulele ubunkokheli bebhunga likarhulumente ngokumfumana kunye namanye amalungu afanele ukukhonza, njengokuba yena uthembise ukuwenza umsebenzi abawunikiweyo.
Kuya kukhunjulwa ukuba iziko lolwazi lwendwendwe, apho ngamanye amaxesha kubizwa ngokuba "liZiko loKwamkelwa" libonelela ngendawo yokumisa, indawo ebonakalayo apho abahambi banokunxibelelana namashishini asekuhlaleni kunye neenkonzo.
Ukongeza, iziko lolwazi lwendwendwe kulindeleke ukuba libonelele ngendawo yokwenza ingeniso ngokuthengisa izinto ezithengiswayo kunye nemisebenzi yezandla yalapha ekhaya nokubamba nokuhlalutya ulwazi olubalulekileyo lwabahambi kunye neenkcukacha-manani ukulungiselela iinjongo zokucwangcisa.
Kwinyanga ephelileyo i-Jamaica Umphathiswa Wezokhenketho kunye no-Sihlalo we-Global Tourism Resilience and Crisis Management Centre (GTRCMC), u-Edmund Bartlett, ubhengeze ukuba iingxoxo ngoku ziyaqhubeka zokusekwa kweziko lesathelayithi le-GTRCMC eNigeria. Isenokuba leli linyathelo lokuqala elifanelekileyo lokumilisela ezokuhamba nokhenketho kwenye yezona ndawo zinamandla nezibalulekileyo eAfrika.
The AfriNgaba iBhodi yoKhenketho ingalamkela eli nyathelo eNigeria kwaye ikulungele ukunceda xa ibuzwa.